Niverina indray ny fanasaritahan’ny governemanta rosiana ny Wikipedia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Oktobra 2015 5:00 GMT
Ny fiverenan'ny fanitsiana Wikipedia ao Rosia. (Sary avy amin'i Kevin Rothrock.)
Taorian'ny folo volana eo ho eo tsy niasana mihitsy, dia nanova ny Wikipedia miafinafina indray ny governemanta Rosiana. Tamin'ny fotoana nanombohany tamin'ny Jolay 2014, dia feno tanteraka ny fotoanan'ny kaonty Twitter @RuGovEdits, izay mifandray ho azy amin'ny fanovana natao tamin'ny tsy fanononana anarana ao amin'ny Wikipedia natao tamin'ny solosaina misy adiresy IP fantatra fa ny an'ny governemanta Rosiana.
Tamin'ny 18 Jolay 2014, nivoaka lohatenim-baovao ny RuGovEdits tamin'ny fikasan'ny Fahitalavi-panjakana sy onjampeom-pirenena Rosian'ny Reehtra hanitsy ny antontanisan'ny lozam-pifamoivoizana sy zava-nitranga misy idiran'ny fiaramanidina ara-barotra. Nifanontona taorian'ny fianjeran'ny Fiaramanidina Malaysia Airlines zotra17 tao Okraina ny fanitsiana, raha niasa mafy ny fampahalalam-baovao fehezin'ny fanjakana Rosiana hanaisotra ireo tatitra milaza fa nazeran'ny balafomanga Rosiana ny fiaramanidina .
Volana maromaro nanombohan'ny @RuGovEdits, dia niditra impolony ankiafina nanitsy avy amin'ny adiresy IPs-n'ny governemanta Rosiana izy io. Tampoka avy eo, tamin'ny 31 Desambra, 2014, tsy nisy olona ny sakeli-dalana. Teo anelanelan'ny fankalazana ny taombaovao sy ny faramparan'ny Septambra, indroa monja ny kaonty no niditra nanao fanovanana tao amin'ny Wikipedia avy amin'ny adiresy IP an'ny governemanta Rosiana.
Tamin'ny Septambra 23, 2015-dimy andro mialoha ny Vladimir Putin ny diako vao tsy ela tany Etazonia, izay nanolotra ny lahateniny ho an'ireo Firenena Mikambana, ary herinandro mialoha ny zavatra mety ho ny fanombohan'ny fanafihana an'habakabaka manohitra lasibatra Rosiana ao Syria- @ RuGovEdits indray Tracking nanomboka asa tsy tapaka amin'ny Wikipedia amin'ny olona mampiasa IPS governemanta Rosiana.
Tamin'ny 23 Septambra 2015—dimy andro alohan'ny dian'i Vladimir Putin nankany Etazonia, izay nanaovany kabary teo anatrehan'ny Firenena Mikambana, sy herinandro alohan'ny daroka baomba an'habakabaka rosiana amin'izay lasibatra ao Syria—nanomboka nitohy mahazatra indray ny asa tao amin'ny Wikipedia nataon'ny @RuGovEdits amin'ny fampiasana olona mampiasa adiresy IP an'ny governemanta rosiana.
“Ny Chupacabra.” Wikimedia commons.
Tsy nisy tamin'ireo fanovanana na fanitsiana vaovao nataon'olon-tsy fantatra no mitovy tamin'ny fikasana hanova ny lahatsoratra miresaka fianjeran'ny fiaramanidina tamin'ny Jolay 2014. Hatramin'ny 25 Septambra, dia nandrakitra fanovanana vaovao 12 ny @RuGovEdits, amin'ny lohahevitra manomboka amin'ny karapifindramonina ao Rosia ka hatrany amin'ny Toekarena Thailandey. Misy aza olona ao amin'ny Sampandraharaham-Piarovana Federaly (izay tompoon'andraikitra amin'ny fiarovana an'i Vladimir Putin sy ireo tompon'andraiki-panjakana hafa) nanao fanitsiana tao amin'ny Wikipedia resaka momba ny chupacabra (biby anganonganoina ho monina ao Amerika ao), manampy torohay amin'ny fahitana bitro maromaro misy namono amin'ny fomba tsy mazava tao amin'ny zanabohitra rosiana iray tamin'ny Septambra 2015.
Hatreto dia iray ihany ny fanovana mampiahiahy ara-politika hitan'ny @RuGovEdits: tamin'ny 25 Septambra, nisy olona nampiasa ny solosain'ny Sampandraharaham-piarovana Federaly Rosiana nanaisotra avy ao amin'ny pejim-pampahafantaran'ny Wikipedia an'ilay governoran'i Chelyabinsk teo aloha Mikhail Yurevich resaka raharaham-panafintohinana tamin'ny 2012 nahavoaroiroy ny toera-piasan'i Yurevich. Naverin'ny mpitantarana ny Wikipedia avy hatrany ny fanovàna ary nohidiany tsy ho azon'ny mpiserasera tsy voamarina anarana ao anatin'ny iray volana ny pejy.
Tsy mazava hoe fa maninona no navitrika tampoka tamin'ny alalan'ny fampiasana ny solosain'ny governemanta rosiana tao amin'ny Wikipedia indray ny @RuGovEdits. Ny fotoana farany nampiasana be ireo adiresy IP ireo tao amin'ny Wikipedia, dia tanatin'ny fidirana an-tsehatra tao Okraina atsinanana i Rosia, miady amin'ilay antsoin'i Kremlin ankarihary hatramin'izao ho “adim-baovao.” Amin'izao fiovam-pifantohan'i Moskoa eo amin'ny sehatry ny politikan'ny raharaham-bahiny mankany Syria izao (izay nanombohany manao daroka baomba mifanohitra amin'ny fanirian'i Etazonia, izay efa nanafika ireo lasibatra an-taonany maro tao Syria ihany koa), ny hatairan'ny fahalianan'ny governemanta rosiana ao amin'ny Wikipedia no mety ho famantarana amin'ny fiverenana amin'ny fomba taloha. Na kisendrasendra ihany angamba izany.